Binita Baral - Chapali girl
Topic: Binita Baral - Chapali girl
Author Topic: Binita Baral - Chapali girl (Read 39352 times)
Re: Binita Baral - Chapali girl
« Reply #20 on: June 24, 2013, 01:11:37 PM »
« Reply #21 on: February 25, 2015, 02:53:01 PM »
नायिका विनिता बराल अचेल अर्गानिक तरकारी खेतीमा व्यस्त छिन् ।
उनले अाफ्नै बारीमा फलाएकी मुला उखेलेकी यो फोटो फेसबुकमा पोस्ट गरेकी छिन् ।
binita baral mula_n.jpg (133.21 kB, 720x960 - viewed 398 times.)
« Reply #22 on: March 08, 2015, 08:46:29 AM »
Book pani lekhne re ....
Multi- talent personality
writer binita.jpg (100.29 kB, 688x720 - viewed 399 times.)
« Reply #23 on: August 13, 2015, 02:40:33 PM »
« Reply #24 on: November 03, 2015, 12:57:11 AM »
विनिता बराल, नायिका
पुस १८, २०७१
मोडलिङ गरें, चलचित्रमा नायिका पनि भएँ र चर्चामा पनि आएँ तर मनमा अझै केही क्रियटिभ काम गर्ने तुस बाँकी नै थियो । त्यसैले यसपटक साहित्य लेखनमा पाइला चाल्दैछु । साहित्यमा मेरो रुचि सानैदेखि थियो । म गीत र कविताहरूको रचना स्कुलमा हुँदा नै गर्थें । पछि पनि समय हुँदा लेख्ने प्रयास गरिरहन्थें ।
यसबीच मैले कृषि व्यवसायमा हात हालें । मैले अर्गानिक खेती थाल्दा विनिताले चलचित्र र मोडलिङ छाडेर खेतीपाती गर्न थाली भन्ने चर्चा गरिएको पनि सुनंे । चलचित्रमा काम गर्नु वा मोडलिङ गर्नु मेरो रहर मात्र होइन, भित्री इच्छा पनि हो । त्यसैले यो क्षेत्र कसरी छाड्न सक्छु ? चलचित्रमा काम गर्न कम गरें, किनभने चाहेजस्तो भूमिका आइरहेको थिएन । अहिले भने भर्खरै उमंगको छायांकन सकेकी छु । यो चलचित्रमा मैले चाहेजस्तो भूमिका निर्वाह गर्न पाएकी छु र अझै पनि चलचित्रमा काम गरिरहनेछु । कतिपयले मैले चपली हाइटपछि अब विनिताले त्यस्ता किसिमको सेन्सेसनल भूमिकामा काम नगर्ने भइन् भन्ने हल्ला पनि चलाएछन् । म जस्तोसुकै चुनौतीपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्छु ।
अहिले मेरो अर्गानिक खेतीको विस्तार पनि भैरहेको छ । टोखामा खेती राम्रैसँग चलिरहेको छ भने बालाजु माछापोखरीभन्दा अलिक पर पनि जग्गा लिएर साझेदारीमा अर्गानिक खेती गर्दै छु । हाल म खेतीमै व्यस्त छु र खेतीको बजार पनि राम्रै पाएकी छु ।
सानोमा हाम्रो देश कृषिप्रधान हो भनेर पढेकी थिएँ । वास्तवमा कृषि पेसाबाटै नेपालका युवाले आफ्नो र देशको प्रगति गर्न सक्छन् । यसैलाई विषय बनाएर मैले उपन्यास लेखेकी हुँ । उपन्यासको शीर्षक पनि कृषिबाटै लिएकी छु । जुइनो- एन एग्रीकल्चर लभस्टोरी शीर्षकमा मैले लेखेको यो उपन्यासलाई हाल आफैं सम्पादन गरिरहेकी छु । कृषि पेसामा लागेको एउटा जोडी प्रेमकथामा आधारित यो उपन्यास अबको तीन महिनाजतिमा प्रकाशनमा आउदैछ । उपन्यास प्रकाशन भएपछि पक्कै पनि मेरो लेखन र अवधारणालाई पाठकहरूले रुचाउनु हुनेछ । उपन्यासको कथा कृषिमा आधारित भएकाले युवाहरूमा यो उपन्यासले कृषि पेसाप्रति मोह जगाउनेछ । जुइनोको अर्थ कृषि उत्पादन बाँध्न पराल बटारेर बनाइने एक प्रकारको डोरी हो । यो उपन्यासलाई मैले पाँचौं पटक सम्पादन गरिरहेकी छु । प्रकाशनअघि फेरि एकपटक भाषा सम्पादन हुन्छ । उपन्यासको प्रकाशनपछि मेरो परिचयमा परिवर्तन आउने विश्वास लिएकी छु ।
« Reply #25 on: November 03, 2015, 01:05:29 AM »
मेरो नाङ्गो शरीर कलात्मक छ – बिनिता बराल
2013 - Jun 08
केही समययता चर्चामा छिन् बिनिता बराल । ५० भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा सुन्दर अनुहार र मादक आँखा मात्र देखिरहेका दर्शकले यसपटक उनको टपलेस शरीर देख्न पाए । कुरा नमिल्नेबित्तिकै निर्माता-निर्देशकसँग टक्कर लिइहाल्ने बानीका कारण पनि विनिता सञ्चारमाध्यमका लागि न्युजमेकर बनेकी छन् । नेपाली चलचित्रमा खुलेर बेड सिन दिएको भन्ने खबरले पनि उनी सबैको चासो बनेकी हुन्। उनका यिनै विवादास्पद कुराले गर्दा उनि चर्चामा आईनै रहन्छिन् । तर उनि भन्छिन् मेरो नाङ्गो शरीर हेर्दा पनि अश्लील देखिँदैन । अरे बाबा ! जब नाङ्गो शरीर हेर्दा अश्लिल देखिंदैन भने के पुरै कपडाले छोपेको शरीर हेर्दा अश्लिल देखिन्छ त ! हैन भन्या आखिर उनको त्यो अश्लिल नदेखिने नाङ्गो शरीर कस्तो रहेछ त मलाई त् साह्रै देख्न मन लाग्यो । मलाई मात्र किन यस्तो कुरा सुने पछी त तपाईं हामी जो कोहिलाई पनि त देख्न मन लाग्छ होला नि ? होइन र कि कसो ?
बिनिता बराल भन्छिन् अहिलेको जमानामा यौन भनेको सामान्य कुरा हो । त्यसैले यसमा झूटो बोल्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन कि उनले अहिले सम्म कसैसँग यौन सम्पर्क राखेकी छन् या छैनन् र उनले अहिले सम्म आफू भर्जिन नै रहेको कुरामा जोड दिन्छिन् । उनलाई आफु कामुक र सुन्दरी मध्ये कुन छौ भनेर सोध्दा यस्तो उत्तर दिईन— म सुन्दरी नहुन सक्छु, तर कामुक छु । एकपटक मलाई कसैले ध्यान दिएर हेर्‍यो भने ऊ नौनीझै पग्लन्छ। मेरो नाङ्गो शरीर हेर्दा पनि अश्लील देखिँदैन, बरु कलात्मक कामुक देखिन्छ । म त आफ्नो शरीर हेरेर आफैं दङ्ग पर्छु ।
« Reply #26 on: November 03, 2015, 01:08:57 AM »
कपडा खोल्दैमा र नांगिँदैमा नराम्रो भन्न मिल्दैनः नायिका बिनिता बराल
शनिबार, मंसिर १३, २०७१
नेपाली रजतपटकी सफल तथा ग्ल्यामरस नायिका बिनिता बराल हिजोआज कृषि फार्ममा व्यस्त छिन् । कृषि फार्मबाट बचेको समय पुस्तक लेखन तिर लगाएकी उनको छिट्टै ‘जुइनो’ उपन्यास बजारमा आउँदैछ । प्रस्तुत छ, युवा पुस्ताकी चर्चित र सफल नायिका बिनितासँगको अन्तरंग कुराकानीः
आजकाल के मा व्यस्त ?
‘जुइनो’ उपन्यास लेख्दैछु ।
हातमा फिल्म पनि छन् रे नी ?
छन्, ‘उमंग’ चलचित्रमा काम गरिरहेको छु ।
कृषि फार्मिङ ?
फार्मिङ पनि राम्रो चल्दै छ, जन्मजातै कृषक भएकाले त्यसैलाई व्यवसायिकता दिने प्रयत्न गरेकी हुँ ।
कलाकारिताबाट लेखन यात्रातिर किन नी ?
साहित्यमा सानै देखि रुचि थियो । लेख्ने प्रयन्तमात्र गरेकी हुँ । साहित्यकार नै बन्न लागेको भने चैं होइन ।
लेख्ने प्रेरणा कहाँबाट जाग्यो ?
कृषि कर्मले । कृषि कर्म गर्दा गर्दै साहित्य सृजना गरौँ भन्ने लाग्यो । कृषि विषयवस्तुमा लेख्दा राम्रो हुने ठानेर यसलाई रोजेकी हुँ ।
शीर्षक पनि जुराईसक्नु भए छ नी?
जुराएँ । ‘जुइनो’ हो उपन्यासको नाम । यो नाम उपन्यासको सम्पादन गरिहनु भएको कृष्ण अविरलले जुराई दिनु भएको हो ।
‘जुइनो’ कसरी बुन्नु भयो?
कृषिमा आधारित रोमान्टिक प्रेम कथा ।
कहिले आउँछ बजारमा ?
चैत्र महिना भित्रमा आउँछ ।
सफल नायिका बन्न हिँडेको मान्छे फरक–फरक विधामा किन?
नायिका बनिसकेँ । कृषक पहिले नै हुँ । त्यसैलाई व्यवसायिकता बनाउने प्रयत्न गरेकी हुँ । साहित्य मेरो रुचिको विषय हो । फेरि म फरक विधामा रमाउन चाहने मान्छे पनि हुँ ।
बिनिता बराल चर्चामा आउन यो सव गरिरहेकी छे भन्ने हल्ला पनि छ नी ?
किमार्थ होइन । प्रत्येक नागरिकको एउटा एउटा दायित्व हुन्छ, त्यही पुरा गरिहेकी छु ।
त्यसै कारणले कृषि रोज्नु भएको हो?
हो, कृषि नै हाम्रो मुख्य पेशा भएकाले मैले मात्रै होइन हामी सवैले यसैमा केही गर्नु पर्छ ।
उपन्यास त्यसैलाई प्रमोसन गर्न खोज्नु भएको हो ?
मैले आम युवापिँढी जो खाडी मुलुकहरुमा ४०/५० डिग्रिको तापक्रममा पसिना बगाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई यहीँ (नेपाल) धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेकी हुँ ।
ग्ल्यामर विकाएकी बिनिताको तरकारी पनि राम्रै विक्यो भन्ने चर्चा छ नी ?
हो, हाम्रो उत्पादन पूर्ण अर्गानिक छ । अर्गानिक भएकै कारण हाम्रो उत्पादनप्रति आम उपभोक्ताहरु आकर्षित हुनु भएको छ । यसले गर्दा मेरो कृषि फार्मबाट उत्पादन भएका तरिकारीको व्यापार राम्रो छ ।
कला क्षेत्रबाट किन बाहिरिनु भयो ?
कृषि फार्ममा अलि व्यस्त हुँदा धेरै ध्यान दिन नसकेको मात्र हो । बाहिरिएकै भने होइन । अहिले पनि चलचित्रमा व्यस्तै छु नी । उमंग भन्ने चलचित्रलाई समय दिइरहेको छु ।
यसबिचमा धेरै चलचित्र पनि लत्याउनु भयो रे नी ?
केही समय चलचित्रमा काम गर्न भ्याइन । लत्याएकै चाँही होइन । मलाई केही चलचित्रको स्क्रिप्ट पनि खासै मन परेन ।
तपाई अभिनयबाट बाहिरिन सक्नु हुन्छ र?
कदापी सक्दिन । चलचित्र मेरो प्यासन भएकाले म अभिनयमा फर्कन्छु । फर्किसकेको छु ।
बिनिताको ग्ल्यामर बिक्न छाडेको हो ?
नेपाली चलचित्र उद्योगमा नायिका बिनिता बरालको कुनै न कुनै हिसावले खोजी भैरहेको छ । त्यसलाई पुरा गर्न म क्रियाशिल छु । मैले नेपाली चलचित्रमा जुन उचाई प्राप्त गरेकी छु त्यसले मलाई चलचित्रमा क्रियाशिल भैरहन बल प्रदान गर्दछ ।
नेपाली चलचित्रको बजार ?
चलचित्रको बजार राम्रै छ । राम्रा मुभिहरुका लागि कुनै पनि बजार नराम्रो हुँदैन ।
नेपाली चलचित्रमा उठाइनु पर्ने विषय ?
चलचित्रले सवै तह र तप्काका मानिसहरुलाई समेट्नु पर्यो । साथै नेपाली कला, संस्कृति यसका अतिरिक्त मानिसका सफलताका कथा आदिलाई पनि समेट्न सक्दा राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि कला, सिर्जनशिलता र प्रविधिको राम्रो संयोजन पनि हुनुपर्दछ ।
चपली गर्ल बिनिता अहिले के हो ?
म उपन्यासकार चाँही होइन । सायद म कृषक नायिका हुन सक्छु ।
एउटा युवती कसरी नायिका बन्न सक्छे ?
एउटी युवती नायिका बन्न संघर्षका हजार जंघार तर्नु पर्दछ । त्यस्तै ‘एक्सन’मा ध्यान दिनु पर्दछ ‘इमोसन’मा होइन ।
तपाईले चलचित्र उद्योगमा ‘भल्गारिटी’ भित्रयाउनु भयो भन्ने आरोप छ नी ?
मलाई त्यसरी भन्न मिल्दै मिल्दैन । यदी नेपाली कला क्षेत्रलाई उँभो लगाउन र विदेशी चलचित्र हेर्ने र मनोरञ्जन लिने दर्शकहरुलाई नेपाली चलचित्र हेर्ने बनाउनका लागि गरिएको सकरात्मक प्रयत्न थियो । त्यो सायद म धेरै हदसम्म सफल पनि भएँ ।
अर्को कुरा नेपालमा धेरै कुरा छोड्नु पर्ने छ । त्यो मध्ये एउटा यस्ताखाले सोच पनि हो । हामीले धेरै कुरा परिवर्तन गर्नु छ । लुगा खोल्दैमा नांगिँदैमा सवै नराम्रो हुँदैनन् । त्यसो भए जनावरहरु पनि नराम्रो हुनु पर्ने नी ? त्यसको अर्थ सवै नायिका नांगिनै पर्छ भन्ने छैन । चलचित्रले के सन्देश दिन खोजेको हो त्यसलाई न्याय गर्न सक्नु पर्दछ । अनि मात्र तपाई सफल नायिका बन्न सक्नु हुन्छ । यदी मैले कसैलाई आइ लभ यू भने भने तपाईले बिनिता त कस्ती चम्मु जसलाई नी आई लभ यू भन्छे भन्नु हुन्छ की, यो त कस्ती स्वीट जसलाई पनि स्नेह गर्दिरहिछे भन्नु हुन्छ त्यो तपाईमा निर्भर हुने कुरा हो । यसर्थ कुन विषयलाई कसरी सोच्ने त्यो नै प्रमुख विषय हो । हामीकाहाँ सकरात्मक सोचको अभाव छ । यसलै गर्दा ममाथि यस्तो टिप्पणी भएको हुन सक्छ ।
तपाई फेरि यस्तै ग्ल्यामर चलचित्र गर्नु हुन्छ ?
यदी कसैले मेरो चित्त बुझाउँछ भने म त्यस्तै अभिनय गर्न तयार छु ।
तपाईले विवाह गर्नु भयो रे नी ?
मैले विवाह गरेको छैन । म माया (लव) मा छु । छिट्टै विवाह पनि गर्छु ।
‘लिभिङ टुगेदर’मा हुनुहुन्छ हो ?
समाजले दिएको भए राम्रै हुन्थ्यो तर संस्कृतिको बन्धनले बाँधेको छ ।
आउँदै गरेको मेरो उपन्यास ‘जुइनो’ पढिदिनुहोस् । बिनिता बराललाई नबिर्सनुहोस्, माया गर्नुहोस् । नेपाललाई माया गर्नुहोस् । कृषि कर्ममा विश्वास गर्नुहोस् ।
प्रस्तुति: रामनाथ खनाल
« Reply #27 on: November 16, 2015, 04:19:00 AM »
"मेरो नाङ्गो शरीर कलात्मक छ – बिनिता बराल". Really?